40Watt 240vac ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအလင်းရောင်
input ဗို့အား: 100-240V
output ကိုလက်ရှိ: 3.34A / 1.67A
ပုံမှန်ထိရောက်မှု - ၈၆%；
အရွယ်အစား: 147 * 43 * 26mm
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CE (LVD), EMC, UL, ROHS, IP67
မော်ဒယ် VD-12040A0695 / VD-24040A0695 VDC-12040A0695 / VDC-24040A0695
input ဗို့အား 100-240V
output ကိုလက်ရှိ 3.34A / 1.67A
Output ပါဝါ 40W
လက်မှတ် အီး (LVD), ul, RoHS, IP67 အီး (LVD), EMC, UL, ROHS, IP67
အရွယ်အစား 147 * 43 * 26mm
အလေးချိန် 300 ဂ
စျေးကွက် အမေရိက၊ ဥရောပ၊ Australiaစတြေးလျ၊ အာရှ
မော်ဒယ်နံပါတ် VD-12040A0695 VD-24040A0695
ရလဒ် DC ဗို့အား 12V 24V
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 3.34A 1.67A
လက်ရှိအကွာအဝေး 0-3.34A 0-1.67A
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ 40W 40W
ဂယက်ထနှင့်ဆူညံသံ (အများဆုံး။ ) Note4 120mVp-p 240mVp-p
ဗို့အားသည်းခံစိတ် Note3 ± 4% ± 2%
လိုင်းစည်းမျဉ်း ± 1% ± 0.5%
ဝန်စည်းမျဉ်း ± 2% ± 1%
ရလဒ်အုပ်စုများ 1 1
အချိန်မှတ်စု ၆ ကိုသတ်မှတ်ပါ 2000ms, (အပြည့်အဝဝန်မှာ) 50ms 100Vac / 230Vac
အချိန်ကိုင်ထားခြင်း (Typ ။ ) (အပြည့်အဝဝန်မှာ) 15ms 100Vac / 230Vac
input ကို Voltage range Note290 ~ 264Vac သို့မဟုတ် 127 ~ 374Vdc
ကြိမ်နှုန်း 47 ~ 63Hz
ပါဝါအချက် (အမျိုးအစား။ ) PF≥0.55 / 100V (အပြည့်အဝဝန်) PF≥0.45 / 230V (အပြည့်အဝဝန်မှာ)
ထိရောက်မှု (Typ ။ ) 84% ၈၆%
AC လက်ရှိ 0.98A / 100Vac 0.5A / 230Vac
Inrush လက်ရှိ (Typ ။ ) အအေး: 55A / 230Vac
ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိ <0.75mA / 240Vac
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ကျော် သတ်မှတ်ထားသော output စွမ်းအား၏ 104% -145%
Protection mode: Hiccup mode သည်ဝန်လျှော့ပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်သက်သာသွားသည်။
တိုတောင်းသောဆားကစ် Protection type: Hiccup mode သည်အမှားများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရရှိသည်
ဗို့အား 13-18V 24.5-35.0V
Protection type: Hiccup mode သည်အမှားများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရရှိသည်
အပူချိန်ကျော် Ta: ၁၀၀ ℃± ၁၀ ℃ (RTH2)
Protection mode: O / P ဗို့အားကိုပိတ်ထားပါ၊ အပူချိန်ကျပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်သက်သာလာသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် အလုပ်လုပ်အပူချိန် -25 ℃ ~ + 50 ℃
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ 10% ~ 90% RH, Non- ငွေ့ရည်ဖွဲ့
သိုလှောင်မှုအပူချိန်။ နှင့်စိုထိုင်းဆ - 25 ℃ ~ + 75 ℃， 5% ~ 95% RH
Temp ။ ကိန်း ± 0.05% / （（0 ~ 40 ℃℃
တုန်ခါမှု 10-300Hz, 1G 10min./cycle, 60min များအတွက်ကာလ။ X, Y, Z ကိုပုဆိန်တစ်လျှောက်တွင်တစ်ခုချင်းစီ
Safe နှင့် EMC ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများ EN61347-1, EN61347-2-13, Ip67 ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်း။
ဗို့အားခံနိုင်ရည်ရှိသည် I / PO / P: 3.75KVac
insolation ခုခံ ငါ / PO / P ကို: 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH
EMC ထုတ်လွှတ်မှု /
EMC ကိုယ်ခံစွမ်းအား /
အခြားသူများ MTBF K200Khrs, MIL-HDBK-217F (၂၅ ℃)
အတိုင်းအတာ 147X43X26mm (L * W * H)
ထုပ်ပိုး 0.3Kg / PCS၊ 50PCS / 15Kg / box, (375X340X175mm)
မှတ်ချက် ၁။ အထူးဖော်ပြမထားသော parameters များကိုတိုင်းတာသည် 230VAC input၊ rated load နှင့် 25 temperature and ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်တွင်တိုင်းတာသည်။
2. အနိမ့် input ကို voltages ကိုအောက်မှာ derating လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက်ငြိမ်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးပါ။
3. သည်းခံစိတ်: set up သည်းခံစိတ်, လိုင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်ဝန်စည်းမျဉ်းများပါဝင်သည်။
4. Ripple & noise ကို 20MHZ bandwidth တွင် 0.1uf & 47uf parallel capacitor ဖြင့်အဆုံးသတ်သောလိမ်ထားသည့်ဝါယာကြိုးကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည်။ ၅။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုကိုပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်နောက်ဆုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ EMC စွမ်းဆောင်ရည်ကတည်းက
တပ်ဆင်မှုအပြည့်အစုံကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိရလျှင်နောက်ဆုံးပေါ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများသည်ပြီးပြည့်စုံသောတပ်ဆင်မှုအတွက် EMC ညွှန်ကြားချက်ကိုထပ်မံအတည်ပြုရမည်။ အအေးကြယ်၏အခြေအနေအောက်တွင်စတင်ချိန်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့် / ပိတ်ခြင်းသည်စတင်ချိန်ကိုမြှင့်နိုင်သည်။
မော်ဒယ်နံပါတ် VDC-12040A0695 VDC-24040A0695
ထိရောက်မှု (Typ ။ ) 84.5% ၈၆%
ဗို့အား 13-18V 24.5-35V
Safe နှင့် EMC ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများ 61347-1, EN61347-2-13, Ip67 ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်း။
EMC ထုတ်လွှတ်မှု EN55015, EN61000-3-2 class A, EN61000-3-3, FCC part15 classB ကိုလိုက်နာခြင်း
EMC ကိုယ်ခံစွမ်းအား EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ကိုလိုက်နာခြင်း
input ကိုဗို့အား 100 ~ 240V
ရှေ့သို့ 15W ပြွန်အလင်းမောင်းသူကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: DCW ယာဉ်မောင်း mw lpv အား 100Watt ac
24v ဦး ဆောင်ယာဉ်မောင်း
လူတန်းစား2ဦး ဆောင်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
ဦး ဆောင်ယာဉ်မောင်း 12v 40w
ယာဉ်မောင်း 24 ဗို့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ယာဉ်မောင်း 40 watt ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ul စာရင်းကိုင် led ယာဉ်မောင်း
ရေစိုခံ Led ယာဉ်မောင်း Ip67
ရေစိုခံ Led Power Supply
dc driver mw lpv60w dc သို့ 12v 5a 60w ac
20w ချွတ်အလင်းပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
DCW ယာဉ်မောင်း mw lpv အား 100Watt ac
15W ပြွန်အလင်းမောင်းသူကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်